ciidanka xoogga oo sheegay dagaalkii Moqokori in ay ku dileen saraakiil Shabaab ah | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta ciidanka xoogga oo sheegay dagaalkii Moqokori in ay ku dileen saraakiil Shabaab...
ciidanka xoogga oo sheegay dagaalkii Moqokori in ay ku dileen saraakiil Shabaab ah
Saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ay faah faahin dheeraad ah ka bixiyeen dagaal culus oo Jimcihii ina dhaaftay ka dhacay degaanka Moqokori oo ka tirsan gobolka Hiiraan.
Taliyaha qeybta 27-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamuud Macalin Koronto oo la hadlay Idaacadda ku hadashay afka Ciidamada qalabka sida ayaa waxa uu sheegay in guulo ay ka gaareen dagaalkii ka dhacay degaanka Moqokori.
Gen. Koronto ayaa waxa uu sheegay dagalkaasi in ciidanka xoogga dalka ay ku dileen Lix saraakiil iyo 20 dagaalame oo ka tirsanaa ururka Al-shabaab, waxaana uu soo bandhigay magacyada saraakiisha ay sheegeen in ay dileen.
Wuxuu sheegay Taliyaha qeybta 27-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamuud Macalin Koronto, saraakiisha ay dagaalkan ku dileen in ay ka mid ahaayeen Xuseen Maadey oo ku magac dheer (Mama) oo ahaa sarkaalkii hogaaminayay dagaalka, Ahmed Cali Fiidow, Muxudiin Maxamed Keysane iyo Xaaji Daa’ud Balli.
General Koronto ayaa ugu dambeyn wuxuu sheegay in horjogayaasha kala ah Muxudiin Maxamed Keysane iyo Xaaji Daa’uud Balli ay tababaro ku soo qaateen dalka Suuriya, horeyna halkaasi ay uga soo qeyb qaateen dagaallo.
Ururka Al-shabaab ayaa dhankooda shalay degmada Aadan Yabaal waxa ay ku soo bandhigeen meydadka askar ay sheegeen in ay ku dileen dagaalkii Moqokori, waxayna tilmaameen in halkaasi ay ku dileen 72 askari.